Ahoana ny fomba hampiasana ny Hulu amin'ny fitaovana rehetra? - Fialam-Boly
Hulu dia fampiharana streaming avo lenta. Niara-niasa tsy tapaka tamin'ny fantsom-pahitalavitra malaza sy fampiharana hafa izy io mba hitondra fonosana mivantana ‘mora’ kokoa ho anao. Ny addon an'i Hulu dia misy ny Live TV, HBO, Disney +, ESPN +, Starz, ary maro hafa. Azonao atao ny miditra amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny App na miditra amin'ny apps hafa tsirairay.
Na izany aza, mety ho somary misafotofoto na sarotra ny mampihetsika ireo fonosana rehetra ireo. Ahoana raha te hanomboka Hulu amin'ny fitaovana amin'ny alàlan'ny solosaina ianao? Eto ianao dia manana mpitari-dalana feno hanampy anao hivoaka.
Ny zavatra rehetra ilainao hampiasana Hulu:
Mila famandrihana Hulu miaraka amina fampiharana sahaza anao ianao mba hampavitrika azy amin'ny fitaovana nomena. Mety mila PC ianao raha te hampiasa ilay kaody fampidirana. Na izany aza, azonao atao amin'ny alàlan'ny mpizaha tranonkala amin'ny findainao koa.
Te hitari-dalana bebe kokoa? Hizaha etsy ambany:
Ampandehano ny fisedrana maimaim-poana Disney Plus
Dingana hampiasana hulu amin'ny fitaovana samihafa:
Tonga ny fotoana izay anananao fitaovana hafa tianao hampiasaina ho an'ny Hulu. Na izany aza, aorian'ny fisintomana ny App dia mety mangataka anao hidira indray izy io. Vokatr'izany dia mila manoratra indray ny solonanarana sy ny teny miafinao ianao. Ity dingana ity dia mitohy amin'ny fitaovana hafa koa.
Na izany aza, azonao atao ny mampihena ny fotoana ilaina hidirana amin'ny kaontinao amin'ny alàlan'ny fampiasa ‘Activate’ nomen'i Hulu. Ny fiasa mampihetsi-po avy amin'ny Hulu dia manome kaody fampandehanana ho anao. Mitovy amin'ny OTP (tenimiafina iray fotoana) fa tsy maintsy soratanao amin'ilay fitaovana ezahinao hampavitrika ny Hulu.
Fa maninona no endri-javatra mora ampiasaina io? Ho an'ireo fitaovana tsy manana teny fanalahidy toa ny Gaming Consoles, mety ho be loatra ny manoratra solonanarana sy tenimiafina feno. Mety hitombo ny fahasosoranao raha diso ny fanoratana anarana solonanarana na teny miafinao. Araka izany, handany fotoana be loatra ianao.
Na izany aza, amin'ny fanarahana ireo dingana ireo dia azonao atao ny mampavitrika an'i Hulu amin'ny tsio-drivotra:
Sintomy ny fampiharana Hulu amin'ny fitaovana tianao hampiasana azy
Ho an'ny dingana faharoa, mety mila miditra aloha ianao.
Aorian'ny fidirana an-tserasera dia hanomboka hampiseho aminao ny kaody fampandehanana ilay tranonkala
Alefaso amin'ny fitaovana tianao Hulu ary sokafy ny fampiharana
Raha tokony hiditra ianao dia kitiho ny ‘Activate this device amin'ny solosaina. '
Hisy fizarana hampidirana ny kaody fampahavitrihana. Soraty ny kaody nomena anao ao amin'ny tranonkala
Hahetsika ny fitaovanao.
Ahoana ny fomba hampiasana ny Disney + na ny ESPN + amin'ny Hulu?
Niara-niasa tamin'i Hulu Disney + ary ny ESPN + hitondra anao fonosana famandrihana combo. Mamela anao hankafy Disney + sy ESPN + miaraka amin'i Hulu. Fonosana mora vidy ihany koa io noho ny hoe mividy misaraka telo ianao. Na izany aza, ny fampandehanana ny perks dia fomba iray hafa tanteraka.
Handray mailaka ianao aorian'ny famandrihana hanaraka ny fampahavitrihana. Manome anao rohy koa izy io hampavitrika ny Disney + sy ny ESPN +. Na izany aza, mety ho asa mandany fotoana na mampatahotra izany. Azonao atao koa ny mampandeha ireo rindranasa ireo amin'ny alàlan'ny Hulu.
Aza adino, mila manana famandrihana fonosana kombo Hulu, Disney, ary ESPN ianao hampavitrika azy. Araho izao dingana izao:
Sokafy ny fampiharana Hulu na mitsidika Hulu.com ao amin'ny tranonkala
Midira ao amin'ny kaonty manana famandrihana
Mandehana mankany amin'ny faritra 'Activations' ankehitriny. Misy safidy hafa azo atao koa
Mikorisa mankany Disney + sy ESPN +
Tokony hisy bokotra ‘Activate’ eo akaikin'izy ireo.
Tsindrio tsirairay izy ireo, satria hampiasan'i Hulu ireo fampiharana ireo ho anao
Vita ianao. Hovelomina ireo famandrihana.
Hamarino tsara fa manana Disney + sy ESPN + napetraka ao amin'ilay fitaovana ianao mba hahamora ny fampiharana Hulu hampandeha azy ireo. Raha manomboka amin'ny tranokalan'ny tranonkala ianao dia mety mila miditra amin'ny App tsirairay ianao. Ho an'izany, mila manome anaram-pikambana sy tenimiafina mitovy amin'ny Hulu anao ianao.
Ahoana ny fomba hampiasana ny Hulu avy amin'ny Disney + App?
Ankoatra ny combo an'i Hulu, misy koa combo Disney + izay manolotra an'i Hulu. Rehefa misoratra anarana amin'ny Disney + amin'ny alàlan'ny combo ianao dia hahazo Hulu ho azy. Ho an'ity dia hahazo mailaka ianao hampavitrika an'i Hulu. Raha tsy nampiasa azy ianao dia mety mila manomboka azy amin'ny tanana ianao. Na izany aza, raha tsy azonao antoka dia azonao atao ny mampandeha ny Hulu anao amin'ny alàlan'ny Disney's App.
Araho ireto dingana ireto:
Sokafy ny Disney + App, alao antoka fa tafiditra ao amin'ny kaonty mety ianao
Ankehitriny, tsy maintsy mandeha any amin'ny safidy sy ny antsipirian'ny faktiora ianao. Any no hahitanao ny fampahalalana mifandraika
Mikorisa ambany, ary raha manana Hulu ao anaty fonosana ny famandrihanao dia ho hitanao voatanisa Hulu
Ankehitriny, tsindrio ny 'Watch now' izay eo akaikin'i Hulu
Halefa ny famandrihanao Hulu
Hamarino tsara fa manana Hulu napetraka amin'ny telefaona. Manamora ny dingana rehetra ho anao izany.
Ahoana ny fomba hitazomana ireo fitaovana ampiasaina amin'ny Hulu?
Manome anao fampandrenesana mailaka foana i Hulu isaky ny mihetsika ny fitaovana vaovao amin'ny kaontinao. Na izany aza, raha very ny mailanao dia misy fomba mora kokoa hanatanterahana izany. Ity dingana ity dia ahafahanao manamarina ireo fitaovana rehetra izay ampandehanana ao amin'ny kaontinao Hulu.
Azonao atao ny mifehy ireo fitaovana ireo, na mivoaka avy ao aminy aza raha mila manao izany ianao.
Voalohany, mitsidika secure.hulu.com/account
Hamarino tsara fa tafiditra ianao ary tsindrio ny Watch Hulu amin'ny fitaovanao
Aorian'izany dia hanana ny safidin'ny ‘Manage Devices.’ Kitiho eo izany
Ny efijery manaraka izay hiseho dia hampiseho aminao ny fitaovana rehetra navitrika tamin'ny kaontinao Hulu. Ho hitanao koa ny datin'ny fampiatoana
Raha te-hanala fitaovana rehetra ianao, dia azonao atao ny manindry ny ‘Esory’ eo akaikin'ilay fitaovana, ary hono i Hulu ho an'ilay fitaovana.
Eo ianao! Afaka izao ianao mankafy an'i Hulu na aiza na aiza tianao. Ireo fomba fampahavitrihana ireo dia azo arahana amin'ny fampiharana hafa koa. Ny ankamaroan'izy ireo dia manana safidy mitovy amin'izany. Ka ny fikarohana kely dia afaka manampy anao amin'izany. Raha manana fanontaniana ianao dia alao antoka fa apetrakao ao amin'ny faritra misy ny hevitra izany. Ary hiverina aminao izahay ASAP!
Ampandehano ny Tari'i TV Tubi
Contraband - Lalao Heist Multiplayer Vaovao an'ny Avalanche Studios!
Fepetra ampidirina ao amin'ny Netflix - Voazava amin'ny antsipiriany ny zavatra rehetra
andramo maimaimpoana ny xbox gold
ny vesatry ny eritreritry ny hafa mijery an-tserasera
mijery sarimihetsika eo noho eo amin'ny Internet maimaim-poana
final cut pro windows download maimaimpoana ny kinova feno
fampiharana mpilalao mozika ambony ho an'ny android